Febroary 2020 | Save A Train
Month: Febroary 2020
Home > Febroary 2020
Fotoana famakiana: 5 minitra Noho izany dia efa nanao izany farany. Ianao nandatsaka noho ny vakansy any am-piasana, nividy ny tapakilan'ny fiaramanidinao, ary nitodi-doha nankany Hongria nandritra ny fialantsasatra mendrika. Ary raha izay no Raharaha tsara ihany no tsara – sady koa anie, Budapest dia tanàna tsara tarehy – aza mivarotra ny tenanao…
Fotoana famakiana: 4 minitra Theaters malaza any Eoropa dia voarary amin'ny lamba ny Eoropeana kolontsaina. Teatra malaza any Eoropa Mampanantena anareo fampisehoana miavaka. Ho handao anao nahatonga, nafindra, ary spellbound! Ny toetry ny fanaovana zavakanto dia mihelina sy ny famoronana miroborobo mahavariana. Ireo jiro mamirapiratra ireo dia miaina hatrany…
Fotoana famakiana: 5 minitra Eoropa mahatonga ka mandevona ny tsy takatry ny saina habetsahan'ny kafe, fa manana ny tsara indrindra fivarotana kafe sy trano fisotroana kafe any Eoropa. Meka mpankafy kafe izy ary tsoriko, be fotsiny fa. Cafe kolontsaina dia varavarankely ho an'izao tontolo izao. Tsy mitady…